ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအဖြစ်မှန်
Ivory Coast ဘောလုံးကစားသမားများ
Eberechi Eze ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Dean Henderson ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Eddie Nketiah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Alexander Sorloth ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာသည့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Francisco Trincao ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ဝီလျံ Saliba ကလေးဘဝပုံပြင် Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Fabio ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
အားလုံးကင်မရွန်းဘောလုံးကစားသမားGhanian ဘောလုံးကစားသမားများIvory Coast ဘောလုံးကစားသမားများနိုင်ဂျီးရီးယားဘောလုံးကစားသမားဆီနီဂေါဘောလုံးဘောလုံးကစားသမားများ
Edouard Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Andre Onana ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာသည့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Samuel Chukwueze ကလေးဘဝပုံပြင်၊
Habib Diallo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Matheus Pereira ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
အဲလက်စ်ပြောပြသည်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အကြောင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Allan Loureiro ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ဂါဗြေလ Magalhaes ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ယောနသန်သည်ဒါဝိဒ်ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
မြောက်အမေရိက SOCCER ပုံပြင်
Giovanni Reyna ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Alphonso Davies ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ခရစ်ယာန် Pulisic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Lee Kang-in Childhood Story Plus မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Faiq Bolkiah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Takumi Minamino ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Caglar Soyuncu ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Takefusa Kubo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
မိုင် Jedinak ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အာရုန်သည် Mooy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
မာကု Viduka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ အာရှဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးပါရမီ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' Shava''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။ Begin ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ဘ0အစပိုင်း
Andrey Sergeyevich အာရှာဗင် ဆာဂေး Arshavin (ဖခင်) နှင့် Tatiana Arshavina (မိခင်) ကစိန့်ပီတာစဘတ်ထဲမှာ 29 မေလ 1981 မှာမွေးဖွား။
သူဟာကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ကားဖြင့်ဝင်တိုက်သောအခါသူ့ကိုသတ်နိုင်မတော်တဆမှုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သူ့မိဘကသူ 12 အခါကသူနှစ်ဦးစလုံးအတူတကွသူတို့ကိုလိုအပ်မယ့်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။ မိမိအမိကိုဆင်းရဲသောသူသည်ဖြစ်သကဲ့သို့သူ့မိခင်နှင့်အတူကပ်ရန်ရှိခြင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Andrey သူ၏မိခင်နှင့်အတူတစ်ဦးကျဉ်းကျုတ်ပြား၏ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအိပ်ရတယ်။ သူကငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကဘောလုံးသမားညာဘက်ဖြစ်လာသူ၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူ့အဖေကသူ့ကိုသတိရသူ့ကိုသူ၏အိပ်မက်နှင့်အတူဆက်လက်ကူညီလာကြရတယ်။ ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကစားသမားဖြစ်လာရန်မိမိပျက်ကွက်ပြီးနောက်ဘောလုံးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုလိုက်မှသူ့ကိုဖျောင်းဖျသောမိမိအဘဖြစ်၏။
အာရှာဗင်အနေနဲ့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာအသက်ခုနစ်နှစ်မှာဘောလုံးကစားစတင်ခဲ့သည်။ သူ၏အဖေထဲမှာသူ့ကိုစာရင်းသွင်း Smena ဘောလုံးအကယ်ဒမီ of ဇင်းနစ်, သူ့မွေးရပ်မြေကလပ်။ Ashavin တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်အခြေခံပေါ်မှာဘောလုံးမှသတိထားရမှာစဉ်ပညာရှင်တွေပိုကြီးတဲ့ဦးစားပေးစဉ်းစားရန်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်သူသည်ဘောလုံး acaademy နီးစပ်သူတစ်ဦးအနီးအနားမှာကျောင်းပညာရေးတက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူကသူ့စာအုပ်တွေဖတ်ပါနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဘောလုံးကစားရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
အချိန်သူ့ကိုဂိမ်း၏လုပ်ရပ်ကျွမ်းကျင်နှင့်အတူတိုးတက်ကြောင်းပညာရေးများအတွက်တန်ဖိုးလျော့ကျနေချိန်တွင်, ဘောလုံးဘို့သူ့မေတ္တာကြီးပွားသတည်း။ တစ်ချိန်ချိန်သူမဟုတ်တော့ပညာရှင်တွေအာရုံစိုက်နိုင်ဘူး။ မကြာခဏမကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ဦးဆောင်တဲ့ပညာရှင်တွေသူ၏လျစ်လျူရှု။
Andrey အဆိုအရ "ကျွန်မကျောင်းတွင်ဆိုးရွားစွာပြုမူ။ ငါဒုတိယတန်းတုန်းကကျွန်မအတန်းသို့တက်ရောက်ရန်မလိုချင်ခဲ့ပါဘူးလို့အတန်း၏မှတ်ပုံတင်ဂျာနယ်ဖြိုဖျက်ကြ၏။ ဒါဟာငါ့ကိုနှင်ထုတ်ခံရတယ်သောဤအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
သူကသူ့ဘောလုံးမိတ်ဆွေများကို join ဖို့အကယ်ဒမီပြန်သွားခဲ့ရတယ်။ သူကအသေးငယ်ဆုံးကလေးနှင့်လညျးမိမိအားလုံးအတွက်တို့တွင်ကပ္ပတိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲသူတစ်ဦးဇာတိမြို့ဘောလုံးသူရဲကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-အနှစ်ချုပ်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး
အာရှာဗင်သြဂုတ်လ 2, 2000 အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံး၌သူ၏ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ ဖြစ်ချင်တော့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်မြေပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဇင်းနစ်ရဲ့ 19-3 စဉ်အတွင်း0နှစ်အရွယ်အစားထိုးဝါရင့် Andrey Kobelev အဆိုပါ Intertoto ဖလားအတွက်ဘရက်ဖို့ဒစီးတီးကျော်အနိုင်ရ။
အဆိုပါကလေးငယ်မှာ St. ပီတာစဘတ်အသင်းရဲ့ စတင်. တကျိပ်တပါးအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်လာမှနောက်ထပ်တစ်နှစ်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ အားလုံးအတွက်, သူ 71 ရည်မှန်းချက်များသွင်းယူနှင့်ရုရှားနှင့်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် 100 ပွဲအတွက် 281 ကိုကူညီပေးနေပို့, ဇင်းနစ်နှင့်အတူရှစ်ရာသီကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ သူကသူ့ကိုချစ်စနိုးသူကိုစိန့် Pete ပရိသတ်တွေ, များအတွက်သူရဲကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည် "Shava"နှင့်မြောက်ပိုင်းတိုင်းမြို့တော်ကနေကလပ်၏အစစ်အမှန်သင်္ကေတ။
သူ 2006 အတွက်တစ်နှစ်တာရုရှားရဲ့ဘောလုံးကစားသမားအမည်ရှိပေမယ့်ကကလပ်နှင့်အတူအာရှာဗင်ရဲ့လာမယ့်နှစ်နှစ်ခဲ့ကြသည်ခဲ့သည် - အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ထွက်လှည့်အရာ - ဒတ်ခ်ျနည်းပြဒစ်ခ် Advocaat တာဝန်ခံယူသည့်အခါ။
ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-မိသားစုဘဝ
သူကပုံမှန်အလုပ်လုပ်လူတန်းစားမိသားစုသို့မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ့ဖခင်ဆာဂေးအာရှာဗင်အနေနဲ့အပျော်တမ်းဘောလုံးသမားအဖြစ်ကစားခဲ့ပါတယ်။ Tatiana Arshavina ရုရှားဘောလုံးကစားသမားကို Andrei Arshavina ၏မယ်တော်သည်။ ဆာဂေးအာရှာဗင်အသက်အရွယ် 40 မှာနှလုံးပျက်ကွက်၏အနိစ္စရောက်လေ၏။
ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-relationship ဘဝ
,3ဇွန်လ 1985 (အသက် 32) ရက်နေ့တွင် Yulia Arshavina ခဲ့သည်မွေးဖွား ကစားသမား Andrey Arshavin ပထမဇနီး။ သူတို့ဟာ 2004 လက်ထပ်နှင့် 2013 အတွက်ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။ အာရှာဗင်သူမ၏နှင့်အတူသုံးလေးတွေရှိပါတယ် - Arseniy အာရှာဗင်, Artem အာရှာဗင်နှင့် သမီး Yana Arshavina ။ သူတို့ရဲ့ကွာရှင်းပြီးနောက် Ashavin လွတ်သွား၏။ ဝမ်းနည်းစရာထက်ပိုနှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့, သူတို့လုနီးပါးဆက်သွယ်ပြောဆိုမရသူသည်မိမိလေးတွေမမြင်ရ။ Yulia ဒါလုပ်နေတာကနေသူ့ကိုမတားဆီးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား, ကတွန်းအားပေးစေခဲ့ပါဘူးသူကို Ashavin ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသာ Moni နှင့်လက်ဆောင်များကိုစေလွှတ်။ ,
ဒါဟာ3နှစ်ပေါင်းသည်သူ၏ကွာရှင်းပြီးနောက်, Ashavin နောက်တဖန်လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ယခင်ဇနီးမှသူ့ကလေးတွေနှင့်အတူပြန်လည်ပေါင်းစည်းနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ သူကသူ့သက်တမ်းကြာရည်းစားအဲလစ် Catimini အတူထုံးချည်ထားလေ၏။ အဆိုပါချစ်သူများ Saint-ပီတာစဘတ်အတွက်စက်တင်ဘာလ 1, 2016 အပေါ်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားကိုဧည့်သည်များမှာလည်းအနည်းငယ်သတို့သမီးနှင့်သတို့သားအိမ်မှာ, တိတ်တဆိတ်အရာအားလုံးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အခမ်းအနားမှာ, အဲလစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားထံမှကလေးများအပါအဝင်သာအရင်းနှီးဆုံးလူတွေ, တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအဲလစ်ဖြစ်လာ, သူမ၏အမည်အားပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းလူသိများသည် Arshavina.
ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-တစ်ဦးကဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ
အာရှာဗင်လည်းလက်မှတ်များ လိုက်. နှင့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအတွက်အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-နိုင်ငံရေးသမား
2007 ခုနှစ်တွင်သူသည်ပါတီယူနိုက်တက်ရုရှားဘို့စိန့်ပီတာစဘတ်၏ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဘောလုံးကစားသမားရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာကသူ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတက်အပ်ပေးတော်မူ၏။
မိမိအမဲဆန္ဒနယ်သည်သူ၏ဇိမ်ခံရွာအမည်ပြောင်း "Arshavinka" အဆိုပါဟောင်းအာဆင်နယ်ကစားကွက်ဖန်တီးရှင်ပြီးနောက်။ ဒါကသူတို့ကိုသူ့အဘို့ရှိသည်စျြခွငျးမတ်ေတာ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-တစ်ဦးကစာရေးဆရာ
ကစားသမား Andrey Arshavin သည်သူ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်သုံးစာအုပ်တွေရှိပါတယ်သူတစ်ဦးစာရေးဆရာ, သည်: "ယူရို-2008 ။ Guus နှင့်သူ၏အဖွဲ့။ ကစားသမား Andrey Arshavin ၏ဒိုင်ယာရီ "; "ကျနော်တို့ကလုပ်ခဲ့တယ်, မဟာအောင်ပွဲ "၏ပုံပြင်; နှင့် တဦးတည်းအမည်ရ 555 မေးခွန်းများနှင့်အမျိုးသမီး, ငွေ, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အဖြေများအပါအဝငျ "အာရှာဗင်။
ကစားသမား Andrey Arshavin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-မေတ္တာ
သူလည်းပရဟိတအလုပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ အာရှာဗင်စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အနီး Pushkin ၏မြို့မှာအရေးပေါ်ကလေးကျေးရွာ၏သံအမတ်ဖြစ်လာမှကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပါသည်။
Emiliano Martinez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Mikel Arteta ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်၊
Freddie Ljungberg ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိမဟုတ်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Donyell Malen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဂျိုး Willock ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Daniely Ceballos ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်ထားသောရက်စွဲ - စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၉
တိုင်းဘောလုံးသမားတစ်ဦးကလေးဘဝပုံပြင်ရှိပါတယ်။ LifeBogger ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကြိမ်ကနေဘောလုံးကြယ်ပွအကြောင်းကိုအရှိဆုံး, ချုပ်ကိုင်အံ့သြစရာများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များဖမ်းယူ။ ကျနော်တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားကမ္ဘာတဝှမ်းဘောလုံးသမားများ၏မရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်များအတွက်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဒီဂျစ်တယ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည်။
အာရုန်သည်ရမ်းဆေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇူလိုင်လ 2, 2020
ကျောက် Xhaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇွန်လ 20, 2020
per မာတီဆက်ကာကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်ထားသောရက်စွဲ - 15ပြီ ၂၄ ရက်၊
ဒင်းနစ် Cheryshev ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Theo Walcott ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Reyes ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်